Baphi The Best Cities Kuba Foodies EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Baphi The Best Cities Kuba Foodies EYurophu
Baphi The Best Cities Kuba Foodies EYurophu
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe ohamba eDenmark, Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSpain, Travel Europe
Ukutya kunjalo elizukileyo, ukutya okumnandi ngakumbi. Kulula kakhulu ukuba azenze ngayo xa ehlala eYurophu ukunika isizathu kakhulu kuba! Izixeko kakhulu Foodies ase Europe, Sithemba ukuba thina foodies ngokunjalo, ngoko ke nawe xa ngokusebenzisa ngale blog! nje, ukufunda ngokucophelela.
Nalu ukhetho yezixeko kakhulu foodies eYurophu ukuba uyakwazi ukufikelela ngololiwe:
Wonke umntu uyazi ukuba ngoku - ukuba uza eYurophu ukuyithanda, ungu ukuya France. Little ngaba ubusazi nangona ukuba uza eFransi ukuya ukuyithanda eateries yayo, njengokuba! Kwilizwe edumileyo ngenxa yothando kwayo ukutya kunye yenkukhu, kube nzima ukukhetha indawo oyithandayo ukuze anelise. Yenza iphutha, nakuba – Lyon yenye yeendawo foodie top yaseFransi ukuba ukuhlola! ingcebiso yethu: rosettes salami zakhutshwa wakhonza kunye pickles cornichon eluhlaza IiReggaeton iifrayizi zamafrentshi. Lyon uhlobene Switzerland ngololiwe ukuze ungasoloko pop kule "lizwe chocolate"Ukuba Kwaphela kamnandi sidlo.
ELyons ingena ngaphakathi uluhlu lwethu Best Cities ukuba Foodies eYurophu ubuhle bayo chocolate nangaphezulu.
IBrussels kwiSitimela saseLyon
Isixeko ayihlali eVienna na apho uya khona ukuba chocolate best ikhekhe eYurophu - Sachertorte. Rich ecocekile, emnyama, zinzulu, Ngesi sizathu, ingcali yethu ikeyiki inikezelwe Austria ukuba abe ngomnye Best Cities for Foodies eYurophu. ngoko apho ukuze ufumane enye? Kuyo nayiphi na izindlu coffee Vienna kaThixo! Le cake utyikityo lizwe, yaye bakule qiniseka uyazi ukuba kunjalo.
PHAWULA: Thatha iifoto ezimbalwa yesixeko kunye nokutya kwazo ngexesha apho – ufuna uku Makabukhanyise Instagram yakho, musa ya?
San Sebastian, Speyin
Xa uziva ngathi ukubetha onke amaqela ogqwesileyo edolophini, nje uhlale e San Sebastian! Ukunyaniseka, udle yeTapas naphi na ku Spain, kwaye uya ziyathanda. KODWA, ukufumana BEST OF THE BEST, uzame kulo mzi lolwandle. Yintoni eyenza le ndawo eyodwa ukwenzela ngumsebenzi wamaziko uluhlu izinongo nobuciko uyakwazi ukukhetha. Okuneziqholo ezimuncu, ashushu nabandayo, yesikhumba zokunika, zonke ukuba ayinakufunyanwa bar eyodwa. Zama iinkuni ezimbalwa endaweni ngamnye ufumana. Uya kuzala, kodwa iyakuba efanele.
Ewe, ukutya uloliwe kunokuba ibe mihle, kodwa hayi nokuba the best train ukutya eyodlula Noma eCopenhagen xa! ke sisibane ukutya yeYurophu, kwaye kufuneka benze konke okusemandleni akho ukuya khangela ngaphandle. Hayi nje oku omnye ngomnye Best Cities for Foodies eYurophu, kodwa indawo etyiwayo ikwayiNo. 1 ibala kuluhlu San Pellegrino iminyaka! Ewe, amanani aphezulu, kodwa incasa kwaye uzama ubalulekile. Ukuba ufuna ukungena ukuba yaseScandinavia ngololiwe, Copenhagen i stop gateway omkhulu nje yokwenza.
Bonn eCopenhagen Uqeqesha
Frankfurt eCopenhagen Uqeqesha
we uphawu uluhlu lwethu lweeDolophu eziPhambili zeeFoodies ezineTrieste, ElamaTaliyane
Asikwazi ukubhala malunga Best Imizi Foodies eYurophu imshiye lonke imnandi ka ElamaTaliyane. Kaloku ... hayi zonke, kodwa ubuncinane ezinye.
Trieste fanele ku Austria-Hungarian Empire ngeMfazwe Yehlabathi I. Le nyaniso kanye apha wongeza ukubaluleka izitya okumnandi Trieste kaThixo. Ngoba? Ngenxa yokuba imbali Trieste babeshiya libe nefuthe elibonakalayo kwi Cuisine yayo. Uhlobo lwe ezifakwa yoqobo Italian, Trieste iyazingca phezu combos ezinga qhelekanga ngomncedisi loo ipasta pizza ecaleni sauerkraut kunye nesoseji zakhutshwa, kunye ezifana. Nandipha ukudla langa, chocolate bukhrim, nekofu nemangalisayo esixekweni apho uYakobi Joyce ukubhala Ulysses. A umbono emangalisa ngaphaya iAdriatic akayi ubuhlungu umdla wakho, mhlawumbi. Le uqhagamshelwano phakathi Italy kunye Slovenia ugqibelele ngololiwe, ke unokunika iSlovenia ithuba ngelixa Ebumelwaneni.
Genoa ku Trieste Uqeqesha
ERoma ukuze Trieste Uqeqesha
EMilan ukuya Trieste Uqeqesha
UFlorence Trieste Uqeqesha
imbali, ukudla, naseYurophu Basoloko isandla ngesandla, kwaye ngoku ithuba ukuhlola konke khona ngokulula kakhulu. Faka Gcina i Train ukuba uzithengele itikiti kaloliwe kwaye uqale adventure yakho foodie namhlanje!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-foodies-europe%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml kwaye bangatshintsha / fr ukuba / de okanye / es kwiilwimi ezininzi.
#traveleurope Food Ukutyazana ukutya train Travel